>တာတီးနှင့်မဲတူ | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: မိတ္ထူ, ဝတ္ထုတို —3Comments	December 14, 2010
ဆိုသော သေနတ်သံသည် အရှေ့ဘက်တောင်တန်း တစ်လျှောက်သို့ ဝေါကနဲ ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်သွားလေ၏။ အိမ်သားတို့မှာ တစ်ပြိုင်နက် လက်ဝါးဖြင့် မျက်နှာကိုအုပ်ထားလိုက် ကြသည်။ ပြန်၍မရဲတရဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြသောအခါတွင် အဖေသည် သူ၏ လက်ထဲမှသေနတ်ကို မုန်းတီးရွံရှာစွာ ခေတ္တမျှစိုက်ကြည့်ကာ မြေပေါ်သို့ ပစ်ချလိုက်ပြီး တပွက်ပွက် ယိုစီးထွက်ကျ လျက်ရှိသောသွေးအိုင်ထဲတွင် တုံးလုံးကလေး လဲနေရှာသည့် “တာတီး” ကို ယူကျုံးမရ နှမြောတသစွာ ငေးစိုက်ကြည့်ရင်း မရှူနိုင် မကယ်နိုင်ဖြစ်နေဟန်တူ၏။ ထို့နောက် တာတီးလဲနေရာသို့ ပြေးသွားပြီး အနီးတွင် ဒူးထောက်၍ ထိုင် ကာတာတီး၏ ပူပူနွေးနွေးပျော့ခွေ လျက် ရှိသော ကိုယ်ကလေးကို တအားပွေ့ယူလျက်မျက်နှာချင်း အပ်ထားလိုက်ကြသည်။ ထိုစဉ်က အဖေ ငိုသည် မငိုသည်ကို သေချာမသိခဲ့သော်လည်း ဖားဖိုကြီးလို ပိန်ချည်ဖောင်းချည် ဖြစ်နေသော အဖေ့ကျောပြင်ကြီးကိုတော့ နောက်ဘက်မှ အတိုင်းသား မြင်ခဲ့ရသည်။ လူတိုင်းပင် ကျောက်ရုပ်တုများကဲ့သို့ တောင့်တောင့်ကြီးရပ်ကာ ကြောင်တောင်ငေးနေကြသည်။ အကျိုးအကြောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းရန် အပြေးအလွှား ရောက်လာကြသည့် အိမ်နီးချင်းများပင်လျှင် အဖေနှင့် တာတီးတို့ အဖြစ်ကို မြင်ကြသောအခါ အံ့သြမိန်းမော ကုန်ကြ၏။
“ဂလု” ကနဲ မျိုချရင်း အမေ့အား……
“မရီ…… သူ့ကို ငါဟိုတစ်နေ့က ဝယ်ခဲ့တဲ့ သက္ကလပ်စောင်နဲ့ ထွေးပြီး ခေါင်းရင်းက ယုဇနပင်အောက်မှာ ကျကျနနမြုပ်ပစ်လိုက်၊ သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှ အကုန်ထည့်၊ သူစားနေကျ ထမင်းဇလုံလေးကိုတော့ သူ့မြေပုံပေါ်မှာ မှောက်ထား၊ ငါမပြန်လာခင် အစအန မကျန်အောင်လုပ်ထားနှင့်…..၊ ကြားရဲ့လား” အမေက မျက်ရည်များကြားမှ ငိုက်စိုက်ငိုက်စိုက်နှင့် ထွက်သွားသောအဖေ့ကို ကရုဏာသက်စွာ ငေးကြည့်ရင်း ခေါင်းကို ဖြေးလေးစွာ ခါလိုက်လေ၏။
“မင်းမလဲကွာ….. တိုစရာမရှိတိုရန်ကော ဒို့ကလေးတွေမှာက ချစ်ခင်ယုယမယ့် ဆွေမျိုးသားချင်း အပြည့်အစုံနဲ့ကွ တာတီးမှာတော့ ဒီလို မေတ္တာရိပ် ခိုလှုံစရာရှိတာမဟုတ်တော့ ပိုပြီး သနားရတယ် ကြင်နာရတယ်ကွ…… မှတ်ထား”
အဖေ့၌ မည်သူကမှ တားမြစ်ဆုံးမလို့ မရသော ဝါသနာဆိုး တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းမှာ အချိန်အားရှိတိုင်း တောတက် အမဲလိုက်နေခြင်းပေတည်း။ နွေရာသီကျောင်း ရက်ရှည်ပ်ိတ်သောအခါ အဖေသည် အိမ်၌ အေးအေးလူလူ နားနေသည်ဟူ၍မရှိ။ သူ့အပေါင်းအဖော်များနှင့် တစ်တောဝင် တစ်တောထွက် အမဲလိုက်ရင်း အချိန်ကုန်ခဲ့သည်ချည်းပင်။ အိမ်သို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ရလာသမျှ ဂျီင်္သား၊ ဆတ်သား အခြောက်များ၊ တိရိစ္ဆာန် သားရေများ၊ ဦးချိုများကို တစ်ခုစီ ထုတ်ပြရင်း ဘယ်ဥစ္စာကဖြင့် ဘယ်လို ရခဲ့တာပဲ …စသည့်ဖြင့် သူလက်ရာကို ဝင့်ကြွားစွာ မြိန်ရေရှက်ရေ ပြန်လည် ပြောပြ တက်ပေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ယုန်၊ ကြက်တူရွေး၊ ဇီးကွက်စသော အကောင်ကလေးများကို အရှင်ဖမ်းခဲ့ပြီး သားသမီး ကစားရန်အလိုငှာ ယူဆောင်ခဲ့တက်သေးသည်။ မှတ်မိပါသေးသည်။ တောမှပြန်ရောက်စ တစ်ခါက သားသမီးများ စုရုံးစေပြီး အိတ်တစ်ခုကို မလျက် အတွင်းမှ လှုပ်နေသော သဏ္ဍန်ကို ပြကာ…..
“အထဲမှာ ဘာကောင် ရှိသလဲ ပြောကြစမ်း” မချိုမချဉ် မျက်နှာပေးဖြင့်မေးရာ မည်သူမျှမှန်အောင် မဖြေနိုင်သောအခါမှ အထုတ်ကိုဖြေပြရာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက်ရှိသော မျောက်မကလေး တစ်ကောင်ကို ဘွားကနဲ တွေ့ကြရလေ၏။ ထို့နောက် ၎င်းမျောက်မကလေးကို ဘယ်ပုံရခဲ့ကြောင်း ရာဇဝင်ခင်းပြရာ မောင်နှမတစ်တွေမှာ တသောသောရယ်ရင်း မျောက်နှင့် လူအသွင်ချင်းတူ၍ နီးစပ်ပုံကို ရင်သပ်အံ့သြ ခဲ့ကြရသည်။ မဲတူ(မျောက်မကလေးကို ပေးထားသော နာမည်) ရခဲ့ပုံကို အလျဉ်းသင့်၍ အနည်းငယ်ဖော်ပြပါရစေ။
“ဟေ့……မရီရဲ့ မင်းကလဲ ငါတို့ကိုသာ အပြစ်ပြောနေတာပဲကွာ …ဒို့တိုင်း ဒို့ချစ်ကြတာများ ဘယ့်သူထိခိုက်နေလို့လဲ၊ ဒို့ရဲ့ သန့်ရှင်းမွန်မြတ်တဲ့ ချစ်ခြင်းကိုမနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့ကွာ……”
“အမယ်လေး …. တော်စမ်းပါ၊ တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်များ သန့်ရှင်းမွန်မြတ်တဲ့ အချစ်လေးဘာလေးနဲ့၊ ကြီးကျယ်လိုက်တာတော်…. ကြီးကျယ်လိုက်တာ”
“ဟ… ဒါကို မင်းနားမလည်သေးပါဘူး၊ ဒီမယ် မရီ… သန့်ရှင်းမွန်မြတ် တယ်ဆိုတာ လူချင်းလူချင်း ချစ်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ တွက်လို့မရဘူးကွ၊ လူချင်း ချစ်ကြတာက ကိုယ်ကောင်းဖို့၊ ကိုယ့်ဖို့ဆိုတဲ့ အခြေခံက စကြတာ။ ဟော…. ငါနဲ့ တာတီး ချစ်တဲ့နေရာမှာ တာတီးဆီက ငါဘာမှ မမျှော်လင့်ဘူး။ ငါ့ဆီက ဘာမှ တာတီး မျှော်လင့်ရကောင်းမှန်းမသိဘူး။ ဘာပယောဂမှမပါတဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုးမို့ သန့်ရှင်းတယ်လို့ ဆိုတာကွ၊ နားလည်ပလား”
“အိုး…ခင်ဗျားရဲ့ (pet) အချစ်တော်က ကျားကလေးတစ်ကောင် ပါလားဗျ… ကျုပ်က ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ကြောင်ကြီးတစ်ကောင်လို့ အောက်မေ့တာ”
အမေကပြုံးနေစဉ် အဖေ့မိတ်ဆွေ ဤကျားငယ်ကို ဘယ်ကဲ့သို့ ရခဲ့ကြောင်း၊ အဖေက မည်မျှ ယုယချစ်ခင်ကြောင်း၊ ပြောပြလျှင်မျက်နှာဖြူက နှုတ်ခမ်းတစ်ဖက်ရွဲ့ကာ ပြုံးလိုက်ပြီး….
“ကောင်းတော့ ကောင်းပါရဲ့….. ဒါပေမယ့် ဒီ့ထက်ကြီးလာရင် လူတွေကို ရန်မူမှာစိုးရတော့ အစိုးရက ခွင့်ပြုမယ်မထင်ဘူး၊ တိရိစ္ဆာန်ရုံပို့ရမှာပဲ..”
“ကျွန်တော်ကောင်ကလေးက ငယ်ငယ်ကတည်းက လူနဲ့နေလာတော့ ဒီလောက်ရိုင်းမယ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ နောက်ပြီး ကျွန်တော်က သူနဲ့မခွဲနိုင်ဘူး။ အင်းလေ..မတော်တဆ အစိုးရက မညှာမတာလို့ တိရိစ္ဆာန်ရုံ ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ပါ လိုက်နေမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျ….. ဟိုကကော ကျုပ်ကို လက်သင့်ခံပါ့မလား”
“ဘာပြုလို့လည်းဆိုတော့…. ကျုပ်တို့က ဥပဒေလေးစားကြရမယ် မဟုတ်လားဗျ….. ကျုပ်တို့လို၊ ခင်ဗျားတို့လို လူမျိုးတွေက အမိန့်တော်ရ ပြင်ဆင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ကောင်းမလဲ၊ ကျုပ်ပြောတာ သဘောတူရဲ့လား”
အဖေက အောင့်သက်သက်နှင့် ………
“ခင်ဗျားတို့ မသိပါဘူးဗျာ ဟိုမျောက်ဖြူကောင်က ကျုပ်ကလေးကို ရန်ရှာနေချင်တာပါ။ ကျုပ်လက်ထဲက လွတ်ရင် သူ့တို့နှိပ်စက်ပစ်တာနဲ့ သေမှာဗျ။ တိရိစ္ဆာန်ရုံရောက်အောင် ခံမယ်မထင်ဘူး” ဟု ဗမာလိုပြောသည်။ မျက်နှာဖြူမှာ ဗမာစကား နားမလည်ပါ။ ပြောရင်း အဖေသည် မျက်ရည်မကျသော်လည်း ရှိုက်၍လာသည်။ နောက်မှ သူ့ကိုယ်သူ အားတင်း၍ ရဲဝန်ထောက်အား…
“ ဟာ….. ဆရာ ဘာလုပ်မလို့လဲ ဆရာရယ်။ တိရိစ္ဆာန်ရုံသာပို့လိုက်ပါဗျာ၊ ဝန်ထောက်ကလည်း ကြိုးစားပေးပါ့မယ် ဆိုထားတာပဲ”
အဖေက သူ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ဘက်လှည့်၍ “ကြိုးစားပါ့မယ် ဆိုတာ အာမခံတာနဲ့ တခြားစီဘဲဗျာ၊ နောက်ပြီး သူ့လိုလူမျိုးတွေက စကားအလှ သုံးတာဗျ၊ ကျုပ် တစ်သက်လုံး အရိပ်တကြည့်ကြည့် လက်ဖျားနဲ့ မထိရက်ဘဲနဲ့ မွေးလာရတဲ့ ကျုပ်ကလေးကို ဘာကြောင့် သူ့ကိုနှိပ်စက်မယ့် လူတွေ လက်ထဲ အပ်ရမှာတုန်း
နောက်ပြီး သူနဲ့ကျုပ် ရှင်ကွဲ ကွဲရတာက သေကွဲ ကွဲရတာထက် ပိုဆိုးလိမ့်မယ်၊ ဒီတော့ သူ့အတွက် ကျုပ်စိတ်ဒုန်းဒုန်းချရအောင်…..”
ထိုအခိုက် ဘုမသိဘမသိနှင့် သေနတ်ယူလာသော အမေ့နောက်မှ အိမ်သားတွေကလည်း ကပ်ပါလာကြသည်။ အမေ ကမ်းပေးသော သေနတ်ကို လှမ်းယူလိုက်စဉ် အဖေ့ မျက်လုံးအိမ်ထဲ၌ မျက်ရည်များ ဝေလျှံလျက်ရှိသည်။ သူသည် ရှေ့လက်နှစ်ဖက်ကိုထုတ်၊ ခြေထောက်ကို နောက်သို့ဆန့်ပြီး ကိုယ်ကလေးကိုဖြန့်လျက် အညောင်းဆန့်နေသော တာတီးကိုတစ်ချက်မျှ စိုက်ကြည့်၍ တစ်လံကွာခန့် ပြေးထွက်သွားသည်။ ထို့နောက် အဝေးမှ လက်ဖျစ်တစ်ချက် တီးလျက် ကြေကွဲ တုန်ရီသောအသံနှင့် “တီးတီးရေ..သားလေး မတ်တက်ရပ် ရှေ့တိုးခဲ့”
December 14, 2010 at 1:38 pm	>ကိုချမ်းကောင်းလိုက်တာ…ဒါပေမယ့် စာလုံးလေးတွေက အရမ်းသေးနေသလိုပဲနော်..မနှင်း
December 14, 2010 at 7:20 pm	>အင်း..မတင်တာကြာလို့တင်လိုက်တဲ့ပို့ (စ)လေးကလဲကောင်းနေတော့ တာပါပဲလား..။ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။လက်မမြဲတဲ့ မျောက်ကို သူတို့ အုပ်စုက ပယ်တတ်တာရယ်တာတီးလေးရဲ့ အဖြစ်ရယ်က ကျွန်တော့် ရင်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ထိခိုက်စေတဲ့စာဆိုရင် စာကောင်းပေါ့ နော်..။ခင်တဲ့ …။
December 16, 2010 at 2:19 pm	>စိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာကိုချမ်းရေ။သံယောဇဉ်ဆိုတာတွယ်မိရင်ဖြတ်ရခက်ပါတယ်။သံယောဇဉ်ကြီးသူတွေဘာကောင်မှမမွေးတာအကောင်းဆုံးပါ။
« >အိန္ဒိယမှ ဗုဒ္ဓဝင်ပန်းချီ
>အီးဘွတ်လိုက်ဘရီလေး (Offline Ebooks Libery) »